Kedu ụdị iko iko ịgba ọgwụ kacha mma? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Glassesgba ịnyịnya ígwè na-agba ọgwụ - otu esi eme
Kedu ụdị iko iko ịgba ọgwụ kacha mma?
Oakley Flak 2.0 XL bụ ihe gbara gburugburuukwuegwuregwu ugogbe anya maka anwụ mere zuru ezu na PRIZM Road anya m makaịgba ígwèna ezigbo eluRxndakọrịta. Flak 2.0 XL nwere oghere dị ogologo, ihe eji emechi zuru ezu, na etiti nke O-Matter ka ọ dị fechaa ma dịgide ka ha na-abịa.Ọnwa Ise 22, 2021
Ọ bụrụ n ’ị na-eche maka ịzụrụ enyo anya igwe na gịnị kpatara ya? Only na-enweta otu ụzọ anya mere nchedo dị mkpa mgbe ahụ ị nọ n'udo. Site n'enyemaka nke Oakley ndị na-akwado isiokwu a, m ga-ejegharị gị site n'ụdị ugogbe agba ịnyịnya igwe dị iche iche na atụmatụ dị iche iche ị ga-ele anya mgbe ịzụrụ ha. (Logo booms) (gravel crunch) (egwu egwu siri ike) N'ezie, Oakley bụ naanị otu n'ime ụdị ndị ọzọ na ahịa.
Downhill ma ọ bụ nzọ ụkwụ nzọ ụkwụ, Southern California ma ọ bụ Yorkshire, na-ahọrọ nri ugogbe anya. Ma ọ bụ ka m kwuo ugogbe anya, n'ihi na n'ezie m ga-ekwu maka ugogbe anya, ga-enwe nnukwu ọdịiche maka ho ị ga-ahụ ha kemfe. Ihe dị ukwuu gbasara ọtụtụ iko bụ na ị nwere ike gbanwee lenses iji mee ka otu iko iko mee ihe dị iche iche ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ọnọdụ dị iche iche.
Tupu m banye na nkọwa, gịnị kpatara nke a ji bụrụ ezigbo echiche? Na-akwọ ụgbọala na iko? Oh, nwa nwoke, ị mere m ezigbo mma ♪♪ Ee, M ♪ - Anya nchedo nke unyi, anyanwụ na ụzarị ọkụ UV ya, ụmụ ahụhụ na-efe efe, ifufe na-adọpụ anya gị na ọsọ. Nke ahụ ọ na-adị ngwa ngwa, ee? Ọbụna ha na-enye gị ihe nchebe ma ọ bụrụ na ị daa, mana anaghị m ada (ọchị). Nwata, m ga - enweta ya ♪ - N’aka nri, ka anyị bido n’ụdị ugogbe dị iche iche na ogo ha.
Ika anaghị adị mma mgbe niile. Anyị nwere iko atọ dị iche iche na Oakley. Yabụ nke a bụ jaket ụgbọ elu, nke kachasị.
Tụlee nke ahụ na Jawbreaker, nke na-enweta obere obere. Nwere ike ịhụ na mkpuchi ahụ na-agbanwe n'ezie. Ma gbadaa ndị na-ahụ maka radar EV, ọ ga-adị ntakịrị ntakịrị.
igwe na-agbanwe igwe kwụ otu ebe
O doro anya na iko dị iche iche na-enye gị nchekwa PR dị iche iche pụọ na unyi na ifufe, mana ị ga-echekwa gbasara nkwekọ nke okpu agha. N'ihi ya, anaghị m ahụ onwe m dị ka akara ngosi ejiji, mana ọ bụrụ na m kpu okpu ihu, enwere m ike iyi enyo anya m na-aga n'ihi na m na-agbago ugwu, enduro ma ọ bụ na-eme nnukwu jumps, na iko na-enye nchebe kachasị mma megide ihe ndị ahụ, megide unyi, kamakwa aa bit si na-ada. Fọdụ ndị mmadụ na-ahọrọ enyo anya nwere okpu ihu, nke ụfọdụ na-ewere igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe adịghị mma, mana mgbe ọ na-ekpo ọkụ ọ nwere ike bụrụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ikuku ikuku bụ ụzọ, ka mma karịa enyo. (Live Dance music) Inweta iko ndị dabara nke ọma na okpu agha gị ga-enye aka mee ka okpokolo agba na ụlọ nsọ nke iko ahụ ghara imetụ okpu agha ahụ aka ma ọ bụ tinye ya n'isi gị, nke nwere ike iru ala.
Ọzọkwa, ụfọdụ iko nwere iko iko edo edo n'okpuru ala iji jide n'aka na ị ga-enweta zuru oke. Okpukpo ugogbe gị ọ na-emetụ ihu ihu okpu agha gị? Amaara m na ụfọdụ ndị nwere okpu agha nke na-anọdụ ala ntakịrị ma ọ bụrụ na ha metụ mgbe okpu agha gị na-agagharị, ọ ga-ewe iwe. yabụ enwere m ike ịhọrọ nnukwu iko dị ka jaket ụgbọ elu ndị a.
Aga m ewere ụfọdụ ncha ahụ nwere ụbọchị anwụ na-acha ebe a na England taa Echefukwala inwe UV nchebe ka anya gị dị mma ma chebe ya na anyanwụ. Ihe ndị a bụ anya lenses Oakley Prizm Trail Torch na enyo ndị a. Yabụ ị nwere ike ịnụla banyere teknụzụ Prizm nke Oakley nwere.
Oakley mere ka ndị a dịtụ mma karị, ntakịrị belata, n'ihi ya, ha na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru osisi ndị dị ka anyị nwere ebe a na n'èzí na ìhè anyanwụ. O doro anya na ọ bara uru ịtụle inwe anya m dochie anya ma ọ bụrụ na ọ dị oge ụfọdụ ha ga-afụcha ụfụ, kamakwa anya m nwere maka ọnọdụ dị iche iche, yabụ ọ bụrụ na ị bi ebe dịka UK, ebe ọtụtụ oge oyi ọ na-adị oke drab ma gbaa ọchịchịrị iji yikwasị iko enyo, a ezi set nke doro anya iko bụ zuru ezu. Na mgbakwunye, ị nwedịrị ike ịtụle ịzụrụ otu iko maka ịnya ụgbọ ala.
Yabụ na Oakley, ị nwere ike nweta okporo ụzọ Prizm a mgbe ọ dị mfe ịnweta ugogbe anya maka anwụ na-arụ ọrụ ma igwe kwụ otu ebe na ụzọ. Ga-ahụ na-aga nke ọma dị ka ịtụle aerodynamics nke iko? Agaghị m, mana Oakley na-eme, ị nwere ike ịchọrọ, ọ bụrụ na ịmee, m bụ ezigbo ụkwara (ụkwara) nerder biker, ma ọ bụ karịa nke kaboodu roadie. (Ọyụ nke egwu kọmputa) Laa nha nke iko, iko ndị nwere obere osisi dị ka nke a Radar EV na-enye ikuku ikuku ka mma, yabụ enwere ike ịbawanye na ọnọdụ ọkụ, kamakwa mgbe ihe na-eme mmiri na nwayọ ma na-emepụta vepo dị egwu.
Ajuju m nuru na mbu bu ma enyo anya eji eme ugboala gi? Ọ bụ ezie na ha yiri nke ukwuu, e nwere obere obere ma dị ezigbo mkpa. Ihe ndị dị ka ụfụfụ n’elu ihe a na-eme n’elu skị nwere ike bụrụ ihe ịtụ n’anya iji kwado gị iji kpoo gị ọkụ. N'elu igwe igwe ma ọ bụ motocross, enwere ihe dị ka ụdị CoolMax foam nke emebere maka ikuku ka ọ ghara ịjụ oyi ọ bụ naanị inye gị ikike dị iche iche na-ahụ anya karịa igwe enyo igwe.
Beenlelewo anya m ndị a, ha adịla mma iyi? Kedu maka ọnụọgụ nke anya m dị iche iche ị nwere ike iji? Nweta nhọrọ ngbanwe maka iko ndị a dịka iko ndị dị larịị, iko doro anya, ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dị iche iche? Kedu maka ihe dabara adaba? Glassesfọdụ iko na-enye ụdị dị iche iche dị iche iche, dị ka Asia Fit. Ọzọkwa ndozi nke ogologo ụlọ nsọ na ụlọ nsọ ndị a. E kwuwerị, gịnị ka ị ga-enweta na ugogbe anya gị? Get nweta ọmarịcha obere ihe siri ike iji mee ka ugegbe gị dị mma na akpa nke na-eme ka oghere lens? N'ihi na enyo anya gị nwere ike mebie karịa na akpa gị karịa na ụzọ.
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ole na ole sitere na Oakley na GMBN mgbe ahụ maka GMBN zutere Greg Minnaar, onye ọkwọ ụgbọala na-akwado ụlọ ọrụ, anọnyerela anyị ọtụtụ afọ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ njem nlegharị anya, Si Richardson na-akpọrọ gị ebe a, ebe nzuzu dị na Southern California, pịa ebe ahụ. Nye edemede ahụ isi mkpịsị aka wee pịa bọtịnụ Idenye aha.
Ego ole ka m kwesịrị ịkwụ maka iko ọgwụ ndenye ọgwụ?
Nankezi ọnụnkeikoenweghị mkpuchi bụ $ 242, dị ka ọnụ ọgụgụ si VSP. Nke ahụ bụ makaosisinaanị. Maka isi, otuanya m, ọ bụ $ 113. Nke ahụ pụtara na ngụkọta ga-agba gị ọsọnkezibanyere $ 351 maka otu ụzọ zuru ezuikoọ bụrụ na ịnweghịọhụụmkpuchi.Jenụwarị 9 2021 g.
Mgbe ọtụtụ mmadụ na-eche Costco, ha na-eche banyere ebe ị ga-azụta akwụkwọ nke afọ, akwa ọhụrụ maka ụgbọ ala gị, na Mayonezi zuru ezu iji jupụta obere ọdọ mmiri, mana ọtụtụ ndị anaghị a attentiona ntị na eziokwu na ha na-ere iko n'ebe ahụ. Yabụ iko bụ ezigbo azụmaahịa na Costco? Ndewo, a bụ m Cindy nke sitere n’ezi Ego Ezinaụlọ. Aga m enyere gị aka ịzụ ahịa karịa, ịchekwa ego, ma chekwaa oge ka ị nwee ike ịgbanwe ụwa ọzọ.
Anyị nwere mmadụ anọ so n’ezinaụlọ anyị na-eyi ugogbe abụọ n’ime ha bụ ụmụ m na-etolite etolite na-agbanwe iko. N'ihi ya, m gburugburu gburugburu ma zụta iko. M zụtara ha mara mma nke ukwuu ebe ọ bụla i nwere ike.
Costco bụ otu n'ime ụlọ ọrụ nyocha kachasị elu dị ka akụkọ ndị ahịa na akwụkwọ ndị ọzọ na-azụ ahịa si dị. N'ihi ya, ekpebiri m ịnwale ha. Taa achọrọ m ịgwa gị ntakịrị gbasara ahụmịhe anyị na-azụ iko na Costco ma m ga-alaghachi ebe ahụ ọzọ.
Mgbe ndị mmadụ zụrụ ugegbe, ihe mbụ ha chere bụ: Kedu etu okpokolo agba dị? Kedu ka nhọrọ na ogo dị? Costco nwere ụfọdụ ezigbo mma okpokolo agba. Ọ dị m ka ha bụ ihe niile ị nwere ike inweta n'ụlọ ọrụ dọkịta. Nhọrọ gị bụ ihe m ga-ekwu.
Ọ dị mma. Ha nwere ezigbo nhọrọ. Stylesdị ha abụghị ihe ọ bụla ị maara ọ dị mma, ma ha dị mma.
Ha bụ iko kwa ụbọchị. Otu n'ime mkpesa m na-eme banyere nhọpụta ha bụ na ugogbe anya okenye ga-aba ọtụtụ n'ihe na ihu nha nha, mana ọ bụrụ nha na ọdịdị nke ihu gị pere mpe mgbe ahụ ị ga-enwe ọtụtụ nsogbu ịchọta ugogbe anya ebe ahụ. Ya mere na ezi-na-ụlọ m di m nwere obere obere isi maka nwoke ma ha enweghị obere osisi nwoke.
N'ezie, enweghi otu okpokolo agba nke masịrị ya. Maka m, enwere m obere akwa imi nke mere na a ga-enwe ọtụtụ iko plastik na-anọdụ na ihu m ma enwere naanị otu ma ọ bụ abụọ dabara m nke ọma n'ebe ahụ. Na okpokolo agba umuaka mara mma, ha mara nma, mana ha enweghi otutu.
Nke kachasị mkpa, mgbe ị na-ele ụmụaka anya, enwere ụdị nha dịgasị iche iche mgbe ị na-ekwu maka afọ isii na afọ iri na abụọ nke nwere ike ịbụ naanị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ga-adabara nwa gị. N'ihi ya, enweghị m obi ụtọ na ụmụaka. Ọbụlagodi na iko ụmụaka na Costco, enweghị ọtụtụ iko na-atọ ụtọ nke nwere agba na agwa mara mma.
I nwere ole na ole, mana ọbụghị ọtụtụ, nke ahụ bụ ihe ọ chọrọ ka nwa m bụrụ. Ihe na-atọ ụtọ karịa ihe Costco nyere. Ya mere, anyị zụtara nwa m osisi.
Ọ bụ naanị na onye na ezinụlọ anyị na anyị zụtara si Costco. O nwere ezigbo ihu mara mma ma anyị nwee ike ịchọta nke ga-adabara ya. Anyị nyere ya iwu otu iko ụmụaka maka akpa ya mgbe ọ bụ 10 na mgbe ahụ otu ụzọ obere iko ụmụ nwanyị mgbe ọ dị afọ 11, na nso nso a ka anyị nyere onye ọzọ iwu.
Ọzọ, ka anyị kwuo maka lenses na Costco. Otu ihe kachasị mma banyere Costco Optical bụ na anya m bụ ngwugwu niile. Mgbe ịzụrụ anya m, ị ga-enweta polycarbonate nke na-eguzogide ọgwụ, ha nwere mkpuchi mkpuchi na mgbochi ịcha ọkọ ma nke a bụ naanị nhọrọ gị maka anya nyocha ọhụụ nke dị mma n'ihi na nke ahụ bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-achọ agbanyeghị .
Ha nwekwara nhọrọ ọzọ maka ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma ha na-enye lenses na-aga n'ihu n'ebe ahụ. Ha na-enyekwa ntughari ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke morphs n'ime ugogbe anya maka anwụ. Ugbu a, anyị abịa akwụ ụgwọ.
Azụrụ m ụzọ abụọ si Costco. Abụọ abụọ dị ihe dị ka $ 110 na otu dị ihe dị ka $ 150. Ọfọn, ndị ahụ niile bụ iko ụmụaka na iko ụmụaka nwere obere ọnụ ala karịa iko ndị okenye.
Ya mere maka okenye eyewear, M ga-atụ anya na m nwere ike na-agụnye n'etiti $ 150 na $ 180 gị zuru ezu ụzọ nke mgbochi ntigbaa na mgbochi ọkọ ọkọ. Nke a bụ n'ezie ọtụtụ ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ. N'ọtụtụ ọfịs ophthalmic, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na dollar ise ruo narị isii na-enweghị mkpuchi.
Tụnyere ndị ọzọ dị ọnụ ala karịa nhọrọ, o doro anya na ọ bụ ezigbo ezigbo ọnụahịa maka uru ị nwetara na Costco. Ugbu a, ka anyị kwuo maka ọrụ dị na Costco. M zụtara iko si ole na ole dị iche iche Costcos na m na-na na-ahụta na mkpara ha na-magburu onwe.
Ha maara n'ezie ihe ha na-eme, ha ga - enyere gị aka ịhọrọ ugegbe anya. Ha dị mma na idozi ha ma tụọ ha na ihe niile. Obi dị m ezigbo ụtọ na ndị ọrụ m zutere na Costco Optical Centers, mana naanị otu ihe dị na ọrụ Costco bụ na ha na-ewu ewu na oge ọ bụla m gara ebe ahụ, ndị mmadụ ga-echere ogologo oge iji nye iwu ịbata. ịgwa mmadụ okwu, ọ dị ka ọ dịghị ihe ọ bụ n'ụbọchị ị ga.
Nwere ike ịnwe ntakịrị ọsọ ọsọ naanị site na ịnwe ụyọkọ ndị mmadụ n'azụ gị, mana ọ dịkarịa ala ndị ọrụ ha dị oke egwu ma ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ na ya. Mgbe ị natara ugogbe anya gị, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe iwu eji emeghachi. Na Costco, ị nwere ike weghachite iko gị ruo ụbọchị 90 na-enweghị ihe kpatara ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọghị okpokolo agba ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma na anya m, a ga-edochi ha n'ime ụbọchị 90 ahụ maka ihe ọ bụla .
Ugbu a, mgbe ụbọchị 90 ahụ gasịrị, ị nwere ike ịnwe ụfọdụ mmesi obi n'ebe ụfọdụ. Na Costco enweghị nkwa ọ bụla ma emesịa ụbọchị 90 ị nweghị ike iweghachite ha maka ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ọ na-adịkarị gị mfe ịgbaji ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ na ugegbe gị, nke a nwere ike ịbụ nsogbu gị.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere a mma akwụkwọ ikike, ị kwesịrị ị na-elele Walmart ọhụụ Center kama dị ka ha nwere mma akwụkwọ ikike. N'ozuzu, echere m na Costco Optical bụ nhọrọ dị egwu ma ọ bụrụhaala na ha nwere okpokolo agba dabara na ihu na ụdị gị. Maka anyị atọ na-enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla na Costco Optical, anyị bụ ndị ezigbo ọmarịcha na Warby Parker.
Warby Parker nwere ike ịdị ntakịrị ọnụ ma dịkwa ntakịrị karịa, ma ha nwere ọtụtụ nhọrọ maka nha iji kwekọọ ihu dị iche iche. Ya mere lelee edemede m na Warby Parker ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị. Na mkpokọta, echere m na ọ bụrụ na ịhọrọ Costco, ị ga-enwe ezigbo obi ụtọ na Costco.
Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị, biko pịa dị ka ịdenye aha na anyị ga-ahụ gị na nke na-esote!
Kedu ihe kpatara ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji iko edo edo?
Anya edo edoiyo karịa nke acha anụnụ anụnụ nke ìhè, na-enye anyị ohere ịhụ ọdịiche dị mma. Nke a na-emesi obi ikendị na-agba ịnyịnya ígwèọhụhụ dị mma nke nwere obere ọkụ, na usoro ndị ọzọ, n'ọnọdụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị nwere obere anwụ.
Yabụ ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị mgbe ahụ ị nwere ike ịnọ na-eche maka enyo ọhụụ abalị. Ndị a bụ anya edo edo na-ekwu na ha na-enwu gbaa ma belata ncha, mana ha na-arụ ọrụ n'ezie? site na dr ahụ ike na-egosi iji nyere gị aka ịmụta ihe niile banyere ọhụụ anya ma chọta ngwaahịa ọhụụ kachasị mma. Yabụ ọ bụrụ na ịnọ ebe a na channelụ pịa bọtịnụ ịdenye aha n'okpuru ka ị ghara ịchefu ihe ọ bụla m ga-eme n'ọdịnihu m na-ekwu maka enyo ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ enyo anya ụgbọ abalị nke gbara gburugburu nwa oge, na mbụ ha bịara karịa agba enyoanya maka ndị mmadụ, ndị ga-aga na nnụnụ ịchụ nta ma ọ bụ nkọ égbè, tinye ndị a pụrụ iche odo ma ọ bụ oroma nzacha na n'ihi na ụdị tint mma ọdịiche a obere na-enyere gị aka ịhụ anya ihe a obere mfe karịa nke a tint na abalị ọhụụ enyo anya nwere agbanweela, ma ugbu a ị hụla na a na-akpọsa ya n'ịntanetị n'ọtụtụ ebe ma nye ya ọdụ gas na ntanetị.
Otu ha kwesiri isi rụọ ọrụ bụ na anya edo edo na-enwusi ike ntakịrị ka ị wee nwee ike ihu ntakịrị n'abalị, ha nwekwara ụfọdụ atụmatụ iji belata nchapu ka ị ghara inwe nnukwu nsogbu na ọkụ ọkụ na-abịa. , ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme ya n'ihi na ihe na-aghọwanye ọkụ ndị ọzọ. Get nweta ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo mgbe ị na-eche m ma ọ masịghị m. Ihe mbu nke na-akpasu iwe bu na mpaghara iko ndi a enweghi ike ime ka ihe di nma n'ihi na ha ghaghi oke onu nke na-abanye n'ime anya, ma ha na-eme ka onye obula na-eche na ihe di nma n'ihi na o weghaara ha acha anụnụ anụnụ ìhè ewepu na na n'ezie naanị mma otú odo ihe niile anya na ngụkọta ọchịchịrị mgbe ụgbọala ala ọchịchịrị asị ụzọ, e nweghị skylights ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla ọzọ? Cgbọ ala ndị na-anya n'eziokwu ga-eme ka ihe sie ike ịhụ, mana n'ihi mmetụta ọkụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwọ ụgbọala na chi ọbụbọ enwere ike ị nwee snow ma nwee ọtụtụ snow gosipụtara na ihe na-acha uhie uhie, mgbe ahụ ị maara nke ahụ ụdị mmetụta? Anya m ndị a na-eme ka ihe pụta ìhè na ọnọdụ ndị a ma ọ masịrị m iyi ha, dịka ọ dị na mgbede ma ọ bụ ọnọdụ ụtụtụ na obere ọkụ.
Ọbụna m jiri ya tụnyere ya mgbe m na-anya ụgbọ ala, na-etinye ha ma ọ bụ na-ewepụ ha, ma chọpụta na ha na-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo mma, ma ọ bụrụhaala na ọ na-eme ka ihe dịkwuo mfe n'abalị, enwere m mwute ma ọ bụghị ihe a na-ekwu dị ka nnukwu ọkụ ihu na-eche, echere m na nke ahụ na-enyere aka. Enwere m mmetụta nke ọma na onwe m, enwere m mpụga oge ole na ole n'afọ ma mmetụta izugbe nke ọkụ ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-ewe iwe, yabụ ma ọ dịkarịa ala, ha na-acha odo odo karịa ọkụ ụgbọ ala ochie site na 1970s, ma ọ bụrụ na ị chetara ihe nke ahụ dị ka um dị jụụ maka ụfọdụ ụdị ndị dị n'èzí, ma ị na-azụ iko pụrụ iche, na-enweta ihe osise dị ka ndị a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ agba odo na iko gị mgbe niile, ndị a nwere nzacha na-agbanwe agbanwe , ọ bụghị 100 dị ka ugogbe anya anwụ, mana ọ nwere nzacha ahụ nke na-ebelata ncha ihu mgbe ị na-ele anya ihu mmiri dị ka ihe atụ n'okporo ámá mmiri, ma ọ bụ ma eleghị anya na-ele mmiri na-agba ọsọ na-ezu ike n'okporo ámá mmiri wee wụpụ ma maa ụra n'anya gị na enwere m ike igosi gị nke a n'ihi na kọmputa m nwere nzacha na-arụ ọrụ n'azụ m ma ị nwere ike ịhụ Ọ bụrụ na m gbanwee ya ogo 90 ị nwere ike ịhụ na ọ na-acha odo odo na nke ahụ bụ n'ihi na nzacha pola na kọmputa na nza polarizing a Enyo enyo ugbua, yabụ ugbu a enwere m ihe ụfọdụ ndị mmadụ gụrụ gbasara isiokwu ndị gara aga nke kwuru na ugogbe anya ịkwọ ụgbọala n'abalị na-enyere ha aka ịkwọ ụgbọala nke ọma n'abalị. Agbanyeghị, tụlee nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya site na 2019 bụ nke a nwalere isiokwu iri abụọ na abụọ na-enweghị ma a na-anwale ugogbe anya abalị n'abalị na simulator ịkwọ ụgbọala na enyo anya abalị na-egosighi mmụba ma e jiri ya tụnyere naanị anya m doro anya, nke na-eweta ọtụtụ obi abụọ ndị mmadụ n'ezie na-enyere aka ọ ka mma ma enwere m ike ikwenye na ha na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụ iru ala dịka m nwere ndị ọrịa batara ma jụọ ma ha nwere ụdị iko ndị a dị iche iche maka iko ịkwọ ụgbọala n'ihi na ọ na-enyere ha aka, mana n'otu oge ahụ enwere m ndị nwara ha, ajụrụ m onwe m ma ha sị mba, ha anaghị enyere ha aka, yabụ aga m enye gị ya na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ịnwale enyo ọhụụ ọhụụ nwere, biko mee ka m mara ma ọ bụrụ chee na ọ na-enyere aka n'ezie, mba, gịnị bụ echiche gị banyere ya maka onye m bụ? Imirikiti ndị ọkachamara n'ọrịa anya ọzọ na-atụ aro na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị, tụlee ihe dị n'ihu gị.
Gbaa mbọ hụ na ihicha anya ihu ikuku gị ka ikuku ikuku gị ghara inwe nsị na mmanụ ọ bụla, ma ọ bụ n’ihu ma ọ bụ n’ihu. Azụ windshield Ọ bụrụ na ị na-eyi ugogbe anya, gbaa mbọ hụ na ha dị ọcha ma dọrọ tụlee ịnwe mkpuchi mkpuchi na-adịghị mma na iko ndị a nwere ike inyere obere aka ma jide n'aka na ọkụ ihu gị na-eme onwe ha ka ha dị ọcha karịchaa ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu. mgbe ọ dị gị ka ihe dị ọtụtụ dị oke ọchịchịrị ma ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, gbaa mbọ hụ na ọkụ ihu gị dị ọcha n'ihi na ha na-enwekwa unyi mgbe ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọhụụ gị na-agbanwe na ịkwọ ụgbọala gị n'abalị na-adịghị mma. , na ya mere na ị naghị enwe ntụsara ịkwọ ụgbọala na-ejide n'aka na ị gara ileta ọkachamara anya anyị n'ihi na enwere ụfọdụ Ọnọdụ anya nke nwere ike ịkpata nsogbu ọhụụ n'abalị. Mgbe ihe dị ka nwute anya na ọbụnadị nsogbu mmebi agwa gị ọzọ na onye ophthalmologist gị, kwue maka mkpebi ikpeazụ m.
Ha na-arụ ọrụ n'eziokwu, enwere m obi abụọ na echeghị m na ha na-arụ ọrụ n'ezie mana amaara m na ha nwere ike inyere ụfọdụ ndị aka wee chee na ọ bụrụ na ị dị mfe? enwe mmetụta ọsọ ọsọ ị nwere ike ịnwale ha mana atụla anya na ha ga-eme ka ihe dị mma ma ọ ga-adị ka ehihie hey ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a kụrụ bọtịnụ dị ka m hapụ ikwu ma ọ bụghị ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele Iji lelee ndị ọzọ jụụ etiti Friday reviews ebe a si dr anya ike ị nwere ike pịa ma ọ bụ kpatụ ihuenyo ebe a ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ile ihe ọzọ dị mma site na ahụike m ị nwere ike ịga n'ihu wee pịa ihuenyo ebe a ma ọ bụ pịnye hey ekele maka itinye anya na ya ma anyị ga-enwe nkata na gị n'oge na-adịghị anya
Gini mere iko eji agba igwe jiri buru oke?
Ee; ha bụ ihe aerodynamic maka arụmọrụ yana nchekwa.Nnukwu anya magbachila echiche gị. O doro anya na ikuku / pebbles ma ọlị, mana mpaghara ọhụụ bụ n'ezie ụzọ ka mma ebe egwuregwu na-adị oke egwu ma na-eji akụkụ ọhụụ dị egwu eme ihe mgbe mgbe. Nke a bụ azịza ziri ezi.
Nabata na GCN TECH ọzọ na-enweghị atụ, n'izu a, anyị nwere ọnụahịa dị mma maka ị. Otu m chọrọ imeri onwe m, mana o doro anya na anaghị m ekwe ka m kere òkè. Agbanyeghị, ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, mana mmadụ atọ nwere ọ happyụ ga-enwe mmeri ọ bụla abụọ, ee, ụzọ abụọ nke ọhụụ ugogbe anya Oakley ọhụụ na oghere nọchiri anya na Low Light Prizm.
Mara ezigbo mma, ooh. Aka nri erubeghị ma pịa akara ngosi obere mgbịrịgba ka ị ga-enweta ọkwa oge ọ bụla anyị bulitere otu edemede. Yabụ ịgaghị atụfu ohere iji nweta nnukwu onyinye dịka nke a. (Logo whiz) Kwatuo ha n'igbe ndị ahụ.
Ọtụtụ n'ime Oakley. Ọbụna igbe ha batara dị mma. Ha nwere ụdị agba agba abụọ.
Mgbe ahụ, anyị nwere ihe mkpuchi dị nro dị nro n'ime. Ndị a bara uru n'ezie maka ịchekwa akpa na nchekwa dị mma mgbe ị na-eme njem. Debe ha nke ọma ma chebe ha.
Yabụ ebe a anyị nwere Oakley Jawbreakers. Mbipụta pụrụ iche. Anyị nwekwara Oakley Sutros na lens nọchiri anya Prizm maka Jawbreakers Yabụ ị nwere ike ịkwọ ụgbọala n'afọ niile, oghere Prizm dị ala bara uru n'oge oyi, a gwara m.
Na iji doo anya, onye ọ bụla n’ime ndị mmeri ga-enweta ụzọ agba abụọ, sutros, na iko. Site na ngụkọta m, Oakleys eyirila ndị mmeri Tour De France karịa ụdị ugogbe anya anwụ ọ bụla ma ha abụrụla ihe a ma ama kemgbe ọtụtụ afọ. Nke mbu, anyi nwere Jawbreakers.
Ha anọwo gburugburu afọ ole na ole ma bụrụ ndị a maara nke ọma na ihu Chris Froome, Mark Cavendish, Greg Van Avermaet na Alejandro Valverde. Kpọpụta ole na ole. Ma ndị a abụghị ndị nkịtị jawbreakers.
Ha bụ ndị mbipụta pụrụ iche nke De De France iji mee emume otu narị afọ nke Maillot Jaune. Yabụ ị nwere okpokoro ojii mara mma nke nwere ọtụtụ nkọwa edo edo iji mee ememme Maillot Jaune ma ọ bụ Yellow Jersey. Gụnyere akara ngosi ndị mara mma odo odo Oakley n'akụkụ.
Obere nkọwa m kachasị amasị m bụ njegharị Tour De France ebe a. Edere nke a na oghere Prizm Road. Prizm bụ teknụzụ lens nke Oakley nke emebere iji bulie ọdịiche nke otu gburugburu, yabụ ị ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ.
Ugbu a Prizm Road bụ maka okporo ụzọ yana ebumnuche bụ ịkọwapụta ala ụzọ ka ị wee nwee ike ịhụ ihe dịka olulu ma ọ bụ akara okporo ụzọ. Ha mekwara lenses Prizm maka gburugburu ebe ndị ọzọ. A na-ezube Prizm Snow maka iji ya na snow.
Dịka ị nwere ike iche, na Prizm Golf ezubere iji nyere gị aka ịhụ bọọlụ ọcha na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enwekwara ọtụtụ nkọwa nkọwa dị ntakịrị dị mma etinyere n’ime ugogbe anya. Yabụ ị nwere oghere ventilashị na ikuku ihu ya ka ọ ghara ịlị elu.
Unobtainium imi mpempe na Unobtainium na aka kwa. Ọfọn, nke a abụghị akụkọ ifo nke kachasị elu nke Pandora wepụtara na ọnwa, ihe bụ isi nke atụmatụ nke James Cameron si na avatar. Ọ bụ kpọmkwem ihe Oak Ley kpọrọ ya polymerị nwe ụlọ nke na-ejide iko na ihu ma nwee ntụsara ahụ.
M pụtara, ọ na-anọ otu ebe. Ọ mara ezigbo mma. Ikekwe ọ bụghị naanị maka ịgba ịnyịnya ígwè.
Ma eleghị anya, ọ dịkwa mma maka moshing. (egwu egwu rockbe) Anyway. A na-anwale iko ndị ahụ ma gbochie 100% nke ọkụ UV.
Kpọmkwem. Gaa na uzo ozo. Na sutros.
Are dị jụụ. Ha ka nwere atụmatụ niile ị ga-atụ anya site na ugogbe anya maka anwụ. Nnukwu, ị maara ọhụụ anya, mana ha bụ ụdị ntakịrị úkwù, emeghị ihe ike karịa, ihe ngwugwu ọzọ.
Ma ntakịrị obere disko karịa ndị na-agba agba. (upbeat disko music) Ọ bụ ya mere eji kee ha. Ọ bụghị maka discos, mana enwere ọnọdụ ebe ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala bidoro ịhapụ ọrụ site na ịhọrọ iko ndị na-adịghị ele anya dị ka egwuregwu ma ọ bụ dị ka Jawbreaker.
Igwe iko ndị a na - abụghị ịgba ịnyịnya ígwè anaghị enwekarị iko kachasị maka ọnọdụ okporo ụzọ ma ọ bụ iko ndị na-ebu Unobtainium-Polymer s pụrụ iche iji jide ha n'ọnọdụ ma ọ bụ ihe ndị dị ka mgbochi fogging. Ya mere, Oakley malitere ịzụlite iko ndị na-adịghị eme ihe ike na egwuregwu karịa atụmatụ ndị dị ugbu a, mana ha ka nwere ọrụ ahụ. Nsonaazụ bụ sutro.
Nye m, ha dị ka ọgbara ọhụụ na ugogbe anya nke ama ama Greg LeMond. Nnukwu ọdịiche dị n'etiti Sutros na Jawbreaker bụ na emeghị ha ka ha gbanwee, nke mere na a na-etinye lens ahụ na iko. Ndị Jawbreakers na-agbaji agba n'ụzọ nkịtị ma na-enye gị ohere igbanwe lens dị iche iche maka gburugburu dị iche iche, nke mere na anyị na-enyekwa Prizm Low Light lens.
Dabere na Oakley, ezubere ya iji bulie nkọwa na ọkụ dị ala na ọbụlagodi ọkụ na-enweghị ime ka mgbanwe agba na ọhụụ gị. Ekwesịrị m ịsị na e nwere nanị onyinye abụọ ma emesia m gaara edebe nke atọ. Gịnị mere echeghị m banyere ya na mbụ? Onye iberibe.
Ihe ọ bụla. Ugbu a maka akụkụ nke ihe niile ị na-eche. Kedu ka m ga-esi nweta M you nwere ugogbe anya maka anwụ nke Oakley a n'aka gị? Ọfọn ọ dị mfe.
Naanị pịa njikọ dị na nkọwa dị n'okpuru ebe a, a ga-akpọrọ gị na peeji nke inyefe anyị. Dejupụta nkọwa gị ma ị nwere ohere iji merie ihe ndị a dị egwu. Ma ọ bụ kpam kpam n'efu.
Ozugbo imesiri nke ahụ, kwụsị na ụlọ ahịa GCN. Anyị nwere t-Chiefs dị ịtụnanya maka ụmụ mmadụ ebe ahụ, gụnyere ọkacha mmasị m ugbu a, nke bụ isiokwu Alpe d'Huez ahụ pụrụ iche, mejupụtara ya na Nkuku Dutch, mara ezigbo mma. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ilele isiokwu mgbe nke ahụ gasịrị, Oakley nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme na ịgba ígwè, yabụ anyị lere anya n'echiche asaa kachasị elu nke Oakley rụtụrụla, ọ bụkwa ezigbo akụkọ, yabụ ọ dị ala ebe a.
Nwere ike ị yikwasị iko ịnyịnya ígwè n'elu iko mgbe niile?
Fọdụikonwee swappableanya mkama, ya mereị nwere ikehọrọ si, sịnụ, doro anya, odo ma ọ bụ anwụrụ ọkụ tupugịsetịpụrụ.Ọ bụrụnke giyọọ ugogbe anya,ị nwere iken'ezieokirikirin'ime ndị ahụ. Ha agaghị egbochi ikuku ma ọ bụ ìhè na-enwu gbaa dị ka ihe dị irè, dịka ha ga-enwe obere ngwugwu ma eleghị anya ọ gaghị adị.Jul 25. 2012 r.
Kedu ihe kpatara iko ji dị oke ọnụ n'agbanyeghị mkpuchi?
Otu ihe dị mkpa kpatara yaugogbe anyaegoya mereọtụtụ bụ n'ihi na EssilorLuxottica nwere ike isetịpụ ọnụego ya na-enweghị ezi agha nke asọmpi n'ahịa efu iji dozie akpịrịkpa. Ezigbo ụzọugogbe anya maka anwụbuukwumara mma, na ọtụtụ ndị dọkịta anya ga-agwa gị na ị ga-eyi ezigbo nchekwa UV mgbe ịnọ n’èzí.
Ihe mkpuchi mkpuchi ọ kwesịrị ya?
Ihe mkpuchi ARihe fọrọ nke nta ka ọ kpochapụ ihe niile na-eche n'ihu ihu na azụ nke anya gị. Na-enweghị mkpesa na-enye nsogbu, ìhè ọzọ nwere ike ịgafe site na anya gị nke na-eme ka ọhụụ gị dị mma. Otutu mmadu kwenyere namgbochi-mkpuchi mkpuchina iko ha bụ n'eziekwesịrịụgwọ agbakwunyere.
Kedu ụdị oghere dị mma maka ụbọchị na-enwu gbaa?
Agba aja aja na ọla kọpalens agbaabụghị naanịdị ukwuu maka ụbọchị na-enwu gbaa, ha ndammana echebe megide-acha anụnụ anụnụ ìhè dị ka nke ọma.Edo-edona ambaanya mna-ejikwa ihe na-acha anụnụ anụnụ, ma ha anaghị egbochi ìhè zuru okeụbọchị na-enwu gbaa.Ọnwa Isii 19. 2020bọchị 2020
Anya anya edo edo ọ dị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè n'abalị?
(Reuters Health) - touted iji meziwanye ọhụụ abalị,oghere edo edoiko anaghị enyere ndị ọkwọ ụgbọala aka ịhụmmana ike, n'eziokwu, ọhụụ ka njọ, nchọpụta ọhụrụ na-atụ aro. “Yiri ugodi (ma ọ bụ iko)bụ odo, acha ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ, na-ewepụ ìhè nke ìhè.Ọgọst 2 2019
Enwere m ike iyi ugogbe anya anwụ mgbe m na-agba ịnyịnya?
Ugogbe anya maka anwụkpuchido anya gi. Ọ dị mfe dị ka ọ na-enweta! Iji ogo dị eluuwe anyaga-echebe anya gị ka ị ghara ịba alaka, akwụkwọ, apịtị ma ọ bụ obere unyi ọ bụla na anya gị mgbe ugwuigwe kwụ otu ebema ọ bụ nzọ ụkwụ na-agba ọsọ.Na-eyiri ugogbe anya maka anwụdị mkpan'ogeoyi dika o din'ogendaeyo.Jul 20 2016 Nọvemba
Ikwesiri iyi ugogbe anya maka anwụ mgbe ị na-agba ịnyịnya?
Ustjá na mpekere -Gịga-ezute anya na-abụghị anya projectiles magị'ịnya ụzọ ụkwụ ma ọ bụ ịmalite ọrụ.Yiri ugogbe anya maka anwụ mgbena-agba ịnyịnya ígwè gị iji chebe anya gị ka irighiri iberibe nwere ike ịbụ ihe kacha mkpa. Iko agaghị echebegịsite na ájá niile, mana ọ gha enyere aka.Ọnwa Ise 18, 2020
Ebee ka ị ga-azụta ugogbe anya maka anwụ kacha mma?
Plọ ahịa Kachasị Anya Nlekọta Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ugwu na Egwuregwu Ugogbe anya maka anwụ. 50% Gbanyụọ na ugogbe anya anwụ kacha mma. All nke anyị gbaa ugogbe anya na-enye ọkọ na-eguzogide ọgwụ, na UV nchedo oghere na a wraparound etiti. A na-ahọpụta Gear Pro nchekwa # 1 ụlọ ahịa n'ịntanetị iji zụta ọgwụ igwe eji agba ịnyịnya ígwè na ntanetị. 1000+ ezigbo nyocha ndị ahịa.
Kedu ka esi eji ugogbe anya maka anwụ maka ugwu?
Ugogbe anya anwụ Bolle maka ịgba ịnyịnya ígwè na-abịa na teknụzụ lens ọhụrụ nke akpọrọ B-mkpa, teknụzụ a na-eji eziokwu dị mfe ọtụtụ wears anaghị eji oge ikpeazụ 1/3 nke anya m. Ha nwere ike mee ka anya gị dị nro karịa, ebe ị na-enwe ọdịdị ugogbe anya maka anwụ.
Kedu ụdị iko ndị onye na-agba ịnyịnya kwesịrị iyi?
Otu onye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike itinye ego na iko iko ịgba agba agba ọgwụ, mana ọ nwetaghị nke ahụ. Ihe a na - ahụkarị maka iko igwe ịgba ịnyịnya ígwè kwesịrị ịnwe bụ kechie anya iko. Kechie iko igwe na-agba ịnyịnya bụ nke kachasị mma n'ihi na ha na-enye nchebe kachasị pụọ na nsị na-efe efe ma kpuchie anya gị pụọ na ikuku.